Suuraan MM duraanii Mangistuu waliin ka'an maaliif nama dheekkamsiise? - BBC News Afaan Oromoo
Suuraan MM duraanii Mangistuu waliin ka'an maaliif nama dheekkamsiise?
Image copyright Hayilemariyam Dessaaleny
Ministirri muummee duraanii Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalanyi suura falmisiisaa Koloneel Mangistuu waliin ka'anii fuula 'facebook' isaaniirratti maxxansanii turan haqaniiru.
Suurichi hogganaa sirna maarkisiistii biyyattii duraanii baqatanii Zimbaabwee jiran Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam waliin seeqaa ka'aniidha.
Itoophiyaan Dr. Abiy Ahimad ijaaruuf deeman kan akkamiiti?
Fuula 'facebook' isaaniirraa haa haqan malee suurri miira garaagaraa namoota keessatti uume kun qoqqoodatamee namoota hedduu bira gahuu danda'eera.
Dura taa'aa duraaniifi miseensa dhaaba sirna Koloneel Mangistuu kuffisuun baqaaf isaan dirqee kan ta'an, Hayilamaariyaam Dasssaalanyi Zimbaabwee biyya dahoo Koleeneel Mangistuu waggoota 30 tti siiquu kan deeman filannoo pireezidantummaa biyyattiin gaggeesitu Gamtaa Afrikaan akka taajjaban filatamaniiti.
Wal-argaa isaanii seena qabeessa kanas Haayilamaariyaam miira araaraa akka qabaatutti kan dhiyeessan yoo ta'u, dursiitotni biyyaatti duraanii biyya isaanii keessatti gahee isaanii bahachaa arguu akka hawwan barreesani suura maxxansan waliin.
Image copyright Hailemariam Desalegn
Goodayyaa suuraa Suurri maxxanfamee ture amma fuula 'facebook' Haayilamaariyaam irraa haqameera
Maaliif falmisiisaa ta'e?
Koloneel Mangiistuun duula goolii diimaa eegalanii fi lubbuu namoota kumaan lakkaawamanii gaaga'ef bakka qaamaan hin argamnetti bara 2007 tti yakka sanyii balleesuun yakkamaa jedhamaniiru.
Yunivarsiitii 'South bank' magaala Landan jiru keessatti barsiisaa kana ta'an Ga'iim Kibre'aab waayee koloneel Mangistuu babarreesaniiru.
Daawwannaan fi wal argaan kun ministira muummee haaraa biyya jijjiiraa jiruun kan jajjabeeffame ta'uu akka hin oolle dubbatu.
Hayilemariyam Dessaalenyifi Mangistuu Hayilemaariyaam wal argan
''Mangiistuun yakkamaadha'' jedhu Ga'iim yaada BBC'f kannaniin.
Araarrii fi jaalallii cimuun gaarii ta'us Koloneel Mangiistuuf garuu dhiifama gochuun akka rakkisu miidiyaalee hawaasummaarrattis namoonni yaada isaanii barreessan jiru.
Yaadni Dr. Awwal Aloo tiwiitariirratti lafa kaahan fakkeenya tokkko.
Image Copyright @awolallo @awolallo
"Mootummaan keenya waa'ee jaalala, dhiifamaafi araaraa haasa'uun waan gaariidha garuu namni hundi bilisa gadhiifamaa, itti gaafatamummaan hin jiruu?" jechuun gaafatu Dr. Awwal.
Koloneel Mangiistuuf dhiifama gochuun namoota hedduun kan mormame ta'us namni hundi mormii qaba jechuu garuu miti.
Daawwannaa san duuba maaltu jira?
Sababni mirkanaa'e jiraachuu baatus shakkiileen garaagaraa jiru.
Gi'aam akka jedhutti Haayilamaariyaam Mangistuu akka daawwataniif Ministira muummee ammaan ergamuniiru.
''Hayyama Abiyyiin alatti Haayilamaariyaam Magiistuu waan argu miti''jedhu.
Namoonni baayyeenis gochi kun qaama sagantaa ''dhiifamaa fi araaraa'' Ministira muummichaa akka ta'e amanu.
Waltajjiiwwan haasaa irratti taasisan keessaa tokko irratti Dr. Abiyyi, sirni isaanii Koloneel Mangiistuufis ta'u dhiifama akka godhu ibsaniiru.
Mormii uummataa waggoota Afuriif biyyattii raasaa ture hordofeetu Ministirri muummee Abiyyi bakka Haayilamaariyaam kan qabatan.
Akkuma aangoo qabataniini tarkaanfiiwwan biyya gara gaariitti jijjiiruu danda'an kan fudhachuu eegalan.
''Akkan yaadutti isaan( mootummaan Abiyyi) hanga ammaatti wanti dalagaa jiran kan nama jajjabeessu fi waan guddaadha'' jedhu Ga'iim.
''Biyyatti isa deebisuuf gaafachuun isaanii na hin dinqisiisu''
Barsiisaan Yunivarsiiti kun adeemsi kuun 'Haqa faallessa' jechuunis ni akeekkachiisu.
Kuni maatii gocha Mangistuun nama jaalatan dhabaniif akka kabaja dhabsiisuutti ilaalamas jedhu.
Bara 1970ta keessa gareen hidhattootaa Dargii jedhamu sirna mootii Haayilasillaasee fonqolchuun aangoo qabatan.
Goodayyaa suuraa Mangistuu Hayilamaariyaam Itoophiyaa bara 1974-1991 bitan
Mangiistuun san keessatti hooggana ta'uun as bahanii duula 'goolii diimaa' jedhuun beektotni, ogeeyyiin garaa garaa fi kanneen sirna sooshaalizimii mormu jedhaman walakkaa miiliyoonaatti siiqan ajjeefaman.
Itoophiyaan biyya sirna sooshaalistii akka taatees labsanii waraana Somaaliyaa waliin tureen madda maallaqaaf Yuuniyeenii Sooveetitti hirkatan.
Bara 1984-1985 gidduutti Beelli lubbuu lammiilee miiliyoona tokkotti siiqu gaaga'es dhalate
Sirni Koloneel Mangistuu kun bara 1991 wayita hidhattootni tokkummaa dhaabilee garaagaraa ADWUI jedhamu Finfinnee hadhuura biyyaa gahu kufuu danda'eera.